ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုင်ရာ လူငယ်တွေ့ဆုံပွဲ (Yangon Youth Forum) ၏ လိုဂိုအတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း - Myanmar Network
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုင်ရာ လူငယ်တွေ့ဆုံပွဲ (Yangon Youth Forum) ၏ လိုဂိုအတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
Posted by chomarwin on June 14, 2013 at 18:27 in Civil Society Development Activities
နေ့စွဲ။ ဇွန်လ -၅ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လူငယ့်အခွင့်အရေး၊ လူငယ့်အသံတို့ကို တစ်နေရာတည်း၌ စုစည်းဖော်ထုတ်လာနိုင်စေရန်၊ လူငယ်အချင်းချင်း ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်၍ လူငယ်များတွေ့ကြုံနေရသည့် လူမှုအခြေစိုက် ပြဿနာများ ကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် အကြံပြုဆွေးနွေးသွားရန်၊ မြန်မာ့လူငယ် လူမှုအဖွဲ့အစည်း (Myanmar Youth Civil Society) များ ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လူငယ်တွေ့ဆုံပွဲ (Myanmar Youth Forum) တက်ရောက်ရန်အတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကိုယ်စားပြုသော လူငယ် ကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးချယ်နိုင်ရန် ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုင်ရာလူငယ်တွေ့ဆုံပွဲ (Yangon Youth Forum) ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုလူငယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပရေး တစ်လျှောက်လုံးတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် လိုဂိုတစ်ခု လိုအပ်လျက်ရှိပြီး လိုဂိုပြိုင်ပွဲတွင် ၀င်ပြိုင်နိုင်ကြပါရန် လူငယ်အားလုံးအား ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်မည့်သူသည်………
(၁) Yangon Youth Forum နှင့် ၄င်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်စေမည့် လိုဂို ဖြစ်ရမည်။
(၂) တစ်ဦးလျှင် အများဆုံး LOGO (၂) ခု ရေးဆွဲ ပေးပို့နိုင်သည်။
(၃) LOGO များကို ဇူလိုင် (၃၁) ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၂း၀၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ yyfmedia@gmail.com သို့ ပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
Logo များကို Yangon Youth Forum ၏ Facebook Page(http://www.facebook.com/YangonYouthForum) တွင် သြဂုတ် (၁)ရက် နေ့မှ စတင်၍ တင်ပေးမည် ဖြစ်ပြီး၊ လိုဂိုများအား လိုဂို ရွေးချယ်ရေးကော်မတီမှ အကောင်းဆုံးတစ်ခုကို ထပ်မံ ရွေးချယ်သွားမည် ဖြစ်သည်။ ဇူလိုင် ၃၁ ရက်နေ့ ၁၂း၀၀ နာရီထက် နောက်ကျ၍ ပေးပို့သော လိုဂိုများအား ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။
Yangon Youth Forum သည် အကျိုးအမြတ်ကို ရည်ရွယ်သော အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ပဲ၊ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် လူငယ့်အသံများ ပေါ်ထွက်ရေး ကို ရှေးရှုပြီးကျင်းပမည့် လူငယ်အကျိုးပြု ပွဲတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါသည်။ ရွေးချယ်ခံရသည့် လိုဂိုပြိုင်ပွဲဝင်သူအား အသိအမှတ်ပြု Yangon Youth Forum Logo Creator Certificate နှင့် ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင် ပေးအပ်ချီးမြှင့်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို yyfmedia.@gmail.com --- နှင့် ဖုန်းနံပါတ်
09-421036631,09402519173,09-450016973,09420018867,09448044225,0943209553--- သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
We also want to invite all of the Myanmar Youths to participate in forum and please visit to our facebook page(http://www.facebook.com/YangonYouthForum)to show your concern by clicking "Like".
Yangon Youth Forum ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့
Yangon Youth Forum Logo Contest.pdf, 157 KB
10656_408124465968745_1090572648_n.jpg, 60 KB